Huawei Nova 5i Pro: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Nandritra ireo herinandro ireo dia maro ny fsary momba ny Huawei Mate 30 Lite. Modely izay tokony ho fantatsika amin'ny volana Oktobra amin'ity taona ity, miaraka amin'ny ambiny. Ny zavatra mahazatra dia ity maodely ity dia miorina amin'ny kinova finday iray natomboka tany Sina. Ity modely ity dia efa natolotra, izy io dia ny Huawei Nova 5i Pro.
Ity Huawei Nova 5i Pro ity no telefaona vaovao ao amin'ny marika Nova, izay vao tsy ela akory izay izay namela antsika telefaona vaovao. Haino aman-jery maro any Shina no efa nilaza fa ity fitaovana ity no ho fototry ny Huawei Mate 30 Lite afaka volana vitsivitsy. Izy io dia telefaona ao amin'ny elanelam-potoana premium an'ny mpamokatra sinoa.
Ny famolavolana ny telefaona dia tena ankehitriny, mampiasa lavaka ao amin'ny efijery. Amin'izany fomba izany, mamela ny alohan'ny telefaona hampiasa mazava tsara, miaraka amin'ny fefy manify amin'ny fotoana rehetra. Raha misy fakan-tsary quad miandry antsika ao aoriana, mba ho mazava ny filokana fakana sary amin'ity sehatra ity.
1 Famaritana Huawei Nova 5i Pro
Famaritana Huawei Nova 5i Pro
Amin'ny ambaratonga teknika dia mahita telefaona ao anatin'ny elanelam-potoana premium an'ny mpanamboatra sinoa isika. Izy io dia ampahany mitombo ary ahitan'i Huawei fahombiazana betsaka. Ka ity Huawei Nova 5i Pro ity dia aseho ho safidy tsara hafa amin'ity ampahan'ny tsena ity. Ankoatr'izay, avelany amina endrika amboarina sy fakan-tsary tsara isika ankehitriny, ankoatry ny hafa. Ireto ny andinindinin'ny telefaona:
efijery: LCD LTPS 6,26-inch miaraka amin'ny vahaolana FullHD + amin'ny 2.340 x 1.080 teboka ary ny tahan'ny 19.9: 9
Fitahirizana anatiny: 128/256 GB (Azo avela hatramin'ny 256 GB miaraka amin'ny microSD)
Fakan-tsary Rear: 48 MP miaraka amina aperture f / 1.8 + 8 MP + 2 MP + 2 MP misy LED Flash
Fakan-tsary eo aloha: MP 32 miaraka amin'ny vava f / 2.0
bateria: 4.000 mAh miaraka amin'ny 20W Fast Charge
Rafitra fandidiana: Android 9.0 Pie miaraka amin'ny EMUI 9.1
Conectividad: Dual SIM 4G, Bluetooth 5.0, WiFi 5, 3,5mm Jack, USB Type-C
ny hafa: Mpamaky sidina aoriana, GPU Turbo, mamoha tarehy
lafiny: 156,1 x 73,9 x 8,3 mm
lanja: 178 grama
Volavola sy fakan-tsary maoderina ho tena manintona azy. Hatramin'ny tamin'ny taon-dasa dia hitantsika ny fanomezan'ny marika sinoa lanja fakan-tsary ireo finday. Ity no tranga ao amin'ity Huawei Nova 5i Pro, izay tonga miaraka amina fakan-tsary efatra amin'ny totalin'ny fakantsary 48 MP. Ka afaka manantena sary tsara amin'ny fotoana rehetra isika. Ho fanampin'izay, ny herinaratra dia tonga amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina artifisialy, izay manampy amin'ny fitiliana sary sy fahazoana maody fakana sary fanampiny.
Ny bateria dia iray amin'ny tanjany, miaraka amin'ny fahaizan'ny 4.000 mAh, izay hanome antsika fahaleovan-tena tsara. Ho fanampin'izay, manana famahanana haingana izy, izay singa manan-danja iray hafa. Ny marika tsy maka risika amin'ity resaka ity ary miloka amin'ny sensor amin'ny tanan-tànana any ambadiky ny telefaona izy ireo. Manohy mitazona azy io amin'ity toerana ity izy ireo, afa-tsy ny avo lenta. Ny finday koa dia manana GPU Turbo, hahafahantsika milalao miaraka aminy.
Huawei Nova 5i Pro any Chine ihany no naseho hatreto, izay hany tsena nanamafisana ny fandefasana azy izao. Raha io no finday hiorenan'ny Mate 30 Lite dia mety tsy hiafara amin'ny famoahana azy any ivelan'i Shina izany amin'ny fotoana rehetra. Saingy tsy maintsy miandry isika vao hahalala bebe kokoa amin'ity lafiny ity.
Tonga amina kinova telo ao amin'ny magazay ao Shina ny telefaona, amin'ny resaka RAM sy fitehirizana. Ny vidin'ny tsirairay amin'ireo kinova finday ao Shina ireo dia efa voamarina, mba hahafahantsika mahazo hevitra momba izany. Ireo ny vidin'ny kinova Huawei Nova 5i Pro:
Ilay maodely 6/128 GB dia mitentina 2.199 yuan (eo ho eo amin'ny 287 Euros)
Ny kinova miaraka amin'ny 8/128 GB dia mitentina 2.499 yuan (eo ho eo amin'ny 326 euro raha hanova)
Ilay maodely 8/256 GB dia mitentina 2.799 yuan (eo ho eo amin'ny 365 Euros)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei Nova 5i Pro: Ny kinova iraisam-pirenena an'ny Mate 30 Lite
Vivo Y90: Fampidinana vaovao vaovao an'ny marika
Asus ROG Phone 2 Preorder dia mihoatra ny singa 2.3 tapitrisa ao amin'ny JingDong ao Shina